Basikety-BAL : Hatomboka amin’ny volana septambra izao ny fifanintsanana amin’ny fifaninanana Basket ball Africa League, raha toa ka efa manomboka voavaha ny olana mahakasika ny tsimokaretina Coronavirus, hoy ny nambaran’ny filohan’ny BAL, i Anibal Manave. Nanome toky ity filoha ity fa tsy maintsy tanterahina ity fifaninanana ity ary ezahina ny hanombohan’izany, amin’ity taona ity. Tsiahivina, klioba afrikanina miisa valo no efa tokony hanoman-tena hiatrika ny dingana famaranana amin’ny fifaninanana BAL.
Basikety-« Youth Leader » : Mifarana, anio, ny fanaterana ny antontan-taratasy mahakasika ilay tetikasa « Youth Leader », karakarain’ny federasiona malagasy ny basikety. Tetikasa natokana ho an’ny tanora manerana ny Nosy hahafahana mampandroso ny basikety lalaovin’olona telo, eto an-dRenivohitra sy any amin’ny faritra. Hahazo fiofanana maimaim-poana eto an-toerana sy any ivelany izay manana tetikasa tsara indrindra amin’ireo rehetra mandray anjara.
« Maison du Sport » Moramanga : Efa manomboka simba sy antitra ny trano anatiny sy ivelan’ny « Maison du Sport » ao Moramanga, raha ny fitsidihana nataon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena tany an-toerana. Nanapa-kevitra, araka izany, ny eo anivon’ny sampandraharahan’ny Tanora eo anivon’ny MJS miaraka amin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny « Maison du Sport », hanamboatra sy hanatsara ity trano ity. Natomboka tamin’ny fametrahana ny « plaque » famantarana izany, omaly.